Indlela yokwenza ngokukhawuleza ukukhanya kwiqhwa elimnyama
Indlela Yokwenza Ukukhanya Kweqhwa Elimnyama
Iingcebiso Ezilula Zokukwenza Iqhwa Elikhanyayo Ungadla
Ukukhanya ebumnyameni ebomvu kulula ukwenza. Ndenze ntoni na? Ndavula ibhotile yamanzi e-tonic, ndayithululela kwi-tray yecube, ndaza ndayibeka kwifrijini. Amanzi e-Tonic agubungela ngokugqithisileyo okwesibhakabhaka phantsi kobumnyama obumnyama . Ukukhanya kusebenze ngenye imithombo yokukhanya kwe-ultraviolet , njengezibane zokukhanyisa okanye ukukhanya kwelanga, nangona ukukhanya kungeke kubonakale kukhanya njengenxalenye kuba igumbi aliyi kuba mnyama.
Ukuba ufuna ukuphinda impembelelo kwisithombeni, ufuna nje ukukhanya okumnyama kwindawo ethile egumbini ngeqhwa.
Iingqungquthela ezikhanyayo zeqhwa
Ngokomntu, ndicinga ukuba amanzi e-tonic adlala kakhulu, ngoko ndinamaphuzu ambalwa okuphucula ukunambitheka kwamacube e-ice. Isipho sokuqala kukucoca amanzi amathoni. Ukuba udibanisa amanzi amathoni kunye namanzi aqhelekileyo iikhabhi zakho zeqhwa ziya kuhlala ixesha elide (i-tonic water cubes iyancibilika ngokukhawuleza) kwaye ayiyi kunambitha kangangoko ifana ne-quinine (isithako esinobangela wokukhanya). Ngaphandle koko, ungayinquma nge-lemonade okanye esinye isiphuzo esimnandi esingaze siphumelele kwi-quangine enomuncu. Inketho yesibini kukubeka iqhwa kwisiphuzo apho i-flavour ifuna. Ukhetho olucacileyo luya kusebenzisa i-cubes e-gin ukwenza i-gin ne-tonic. Izinketho ezingekhoyo utywala zibandakanya ijusi yesithelo, iNtaba iDew ™, okanye iKool-Aid ™. Musa ukukhathazeka ngokunciphisa ukukhanya okuvela kwiqhwa.
Esi sithombeni sinamanzi e-tonic e-ice kunye namanzi.
Iintlobo zeTonic Water
Amanzi e-tonic kufuneka afake i-quinine. Ayinokwenza umehluko nokuba usebenzisa ukutya okanye i-tonic yamanzi rhoqo, qiniseka ukuba ilebula uluhlu lwe-quinine. Ezinye iimveliso ziqulethe ukunambitheka kunabanye, kodwa ndineenhlanhla ngokulinganayo ngeempahla ezinokungabibizi kweevenkile kunye neemveliso ze-premium.
Enye ingcebiso kukusebenzisa izitya zeplastiki ezicacileyo endaweni yeziglasi. Iincinci ezininzi zeplastiki zikhanya ngokugqithiseleyo phantsi kombane omnyama, ngoko ufumana ukukhanya okungeziwe xa usebenzisa. Unokufuna ukuthatha ukukhanya okumnyama omncinci nawe xa uthengela, ukuze ubone okunye okuya kukukhanyisela.
Unokwenza iqhwa kwi-crystal ibhola ukukhabisa izitya okanye ukujonga nje.
Indlela Yokwenza Iqhwa Elivuthayo | Khanyisa kwiSlime ebumnyama
Indlela yokwenza i-Toys zeSayensi
Izibane zeGlow Stick Lanterns
Iingcamango Zobulungisa beSayensi
IiNzululwazi zeeNzululwazi: Zondla, ziNandi, ziNgcini, okanye ziNzantya?
Indlela yokwenza i-yogurt ngeKhemistry
Indlela Yokubeka Umlilo Emvula
I-Green Fire Whirlwind
Indlela yokwenza i-Recrystallization
Indlela yokususa i-cafeine kwiTe
Izityalo kunye neZomhlaba zePhysical Projects
Ukuphendula kweHalloween okanye ukuphendula kwe-Old Nassau
Pitbull - "Ndiphe yonke into" equkethe i-Ne-Yo, i-AfroJack ne-Nayer
Khangela xa kufike ixesha elifanelekileyo lokufumana intlanzi
Ukukhumbula uKlawudiyo uPtolemy: uYise we-Astronomy neJografi
Ngaba Ndingayenza I-volley ibhola kwiTable Tennis okanye i-Ping-Pong?
Uluhlu lokuThengwa kweSikolo soMthetho wakho
IYunivesithi yaseAlaska Fairbanks Admissions
Iintlobo zeeMveliso zeMichiza kumaProtini
Indlela yokubopha i-Knef Reef
UWillow Oak - Indawo yokuTyiwa kwezilwanyana eziLuthandayo kunye neMhlaba
I-Gemini ne-Scorpio Uthando olufanelekileyo
"Ithenda yeshumi elinesithathu" nguDein Setterfield - Ukuhlaziywa kweNcwadi
Indlela yokudibanisa "Ukuthakazelisa" (ukuBamba, ukuKhetha)
Ukusebenzisa iMagical Poppets neeDolls
Izinto ezili-10 zokumazi ngoJacob Madison
Indlela Yokufumanisa Oko Kuxabisekileyo
Ngaba "I-Peut-être que" Ifuna ukuba iSunjunctive?
10 Iinkcukacha Ngeentaka
Ngaba i-Nail Polish ibulala amaChiggers?
Izibonelelo zoqeqesho lweDryland kwi-Springboard kunye ne-Platform Diving
I-Orishas: i-Aganyu, iBabalu-Aye, iCango kunye ne-Eleggua
I-Radiation Radiation Definition
Isikolo se-Epiphany saseBoston: Isikolo seSikolo-samahhala
Yenza Imveliso Yakho Yomkhaya